Amathangi wesitoreji esonga ugesi ayindlela ebiza imali yokugcina uketshezi oluningi epulazini likaphethiloli noma endaweni enkulu yokugcina izinto. Ukuhanjiswa kugoqiwe futhi kulula ukuthunyelwa, amathangi ethu aguquguqukayo ayindlela enhle yokugcina isitoreji sikaphethiloli wesikhashana ...
Ngokujwayelekile kwaziwa njengesilonda somcamelo noma amathangi wesitayela ayizicaba, lezi zikhwama zihlala ziyindlela yokonga nehlale ithandwa yokugcina noma ukuhambisa amanzi aphuzwayo nemvula, noma udizili nophethiloli. Igoqeka kalula futhi ilula ngokwengeziwe, ingahanjiswa iye ezindaweni ezikude ezingenalutho, noma ezigcwele lapho i-config ...
Ithangi Lokulima Izinhlanzi Elingenabuthi le-PVC
Ithangi lokulima i-PVC Fish lepulazi lezinhlanzi zasemanzini, isiko lesikhashana, umbukiso wezinhlanzi ezokuthutha izinhlanzi, Umklamo wokusonga ngokuxhaswa kwepayipi le-PVC. Siphakela ama-Intercircule Aquaculture Systems (RAS). Ingakhiqiza inqwaba yezinhlanzi endaweni encane, inciphise ukusetshenziswa komhlaba wezinhlanzi ...
Imboni yezolimo zasemanzini ibilokhu ikhula futhi iguquka ngokushesha okukhulu. Namuhla, i-aquaculture ibanga amaphesenti ama-50 ezinhlanzi ezidliwe emhlabeni jikelele. Ukuthembela ekufuyweni kwasemanzini kulindeleke ukuthi kuqhubeke nokwanda, ngezikhathi eziningana izinga lokukhula lokunye ukukhiqizwa kwenyama. Lokhu kwethembela okukhulayo emanzini ...